सामान्य, परम्परागत, र व्यावहारिक (UCR) के हो? - कम्पनी | सेप्टेम्बर 2021
भारी खेल समाचार प्रेस समाचार, कल्याण कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी, औषधि जानकारी कम्पनी, चेकआउट स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर मनोरञ्जन स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य समुदाय, कल्याण औषधि जानकारी कम्पनी, समाचार
मुख्य >> कम्पनी >> सामान्य, परम्परागत र उचित (युसीआर) के हो?
सामान्य, परम्परागत र उचित (युसीआर) के हो?
यदि तपाईं एक मेडिकल बिल द्वारा कहिल्यै आश्चर्यचकित हुनुभयो भने, तपाईं एक्लो हुनुहुन्न। कहिलेकाँही आश्चर्य हुन्छ किनकि तपाईंको बीमा कम्पनीले केही वा सबै कभर गरेन जुन तपाईंको चिकित्सकले एक चिकित्सा प्रक्रियाको लागि चार्ज गर्‍यो किनकि यसले उनीहरूको यूसीआर, वा सामान्य, प्रथागत र उचित दरलाई पूरा गर्दैन।
बीमा कम्पनीहरूले UCR विधि प्रयोग गरीरहेको छ कि एक भौगोलिक क्षेत्र चार्जमा अन्य डाक्टरहरूको बहुमतको आधारमा उनीहरूले नेटवर्क बाहिर सेवा को लागी कति तिर्ने भनेर निर्णय गर्न। यदि तपाइँको डाक्टरले बीमा कम्पनीको UCR दर भन्दा माथि बिल गर्छ भने, तिनीहरु सबैलाई कभर गर्न सहमत छैनन्, तपाईलाई UCR शुल्क चार्ज गरेर बाँकी तिर्ने।
यदि तपाईं ईन्-नेटवर्क प्रदायक प्रयोग गर्नुहुन्छ, र तपाईंसँगaछ प्रबन्धित हेरचाह योजना HMO, PPO, वा POS जस्तो तपाईले युसीआर फीसको बारेमा चिन्ता लिनु पर्दैन। त्यो किनभने ती प्रदायकहरूले पहिले नै तपाईंको बीमा कम्पनीसँग सम्झौता गरेका छन् र उनीहरूको पूर्ण भुक्तानीको रूपमा यूसीआर दर स्वीकार्न सहमत भए। कहिलेकाँही, तपाईले एक नेटवर्क प्रदायक प्रयोग गर्न आवश्यक पर्दछ, वा तपाईसँग एक हुन सक्छ क्षतिपूर्ति योजना (जुन विरलै छ)। यसैले युसीआर फीसले कसरी काम गर्छ भनेर जान्न राम्रो हुन्छ र यदि तपाईं सक्नुहुन्छ भने कसरी ती बेवास्ता गर्नुहोस्।
एडविल को कति मिलीग्राम तपाइँ लिन सक्नुहुन्छ
UCR को अर्थ के हो?
UCR सामान्य, परम्परागत, र व्यावहारिक हो, र यो एक बीमा कम्पनीहरूले निर्णय गर्छ भने कसरी एक प्रोफेसर को लागी एक प्रक्रिया प्रदायक को लागी अधिकतम रकम को लागी चार्ज गर्नु पर्छ सो भन्दा अधिक वा बराबरको निर्णय गर्छ भनेर परिभाषित गर्दछ।
यहाँ छ कि बीमा कम्पनीहरूले कसरी सामान्य, परम्परागत, र व्यावहारिक मापदण्ड परिभाषित गर्छन्:
सामान्य: चार्ज सामान्य मानिन्छ यदि यो एक व्यक्ति चिकित्सा प्रदायकले सामान्यतया विगतमा उस्तै वा समान प्रक्रियाहरू वा सेवाहरूको लागि बिरामीहरूलाई शुल्क लगाएको कुरासँग मेल खान्छ भने।
चलनअनुसारको: चार्ज प्रथागत छ यदि यो फीसको दायरा भित्र छ जुन अन्य भौगोलिक क्षेत्रका अन्य मेडिकल प्रदायकहरूले उही वा उस्तै प्रक्रियाहरू वा सेवाहरूको लागि शुल्क लिन्छन्।
उचित: चार्ज उचित मानिन्छ यदि यसले दुबै सामान्य र परम्परागत मापदण्ड पूरा गर्दछ वा यदि यो विशेष अवस्था हो भने। त्यो एक दुर्लभ वा धेरै गाह्रो प्रक्रिया समावेश हुन सक्छ।
सामान्य, परम्परागत, र व्यावहारिकको अर्थ के हो?
बीमा कम्पनीहरूले कसरी उनीहरूको UCR चार्जहरूको साथ आउँदछन् रहस्यको एक थोरै हुन सक्छ, तर प्राय जसो उनीहरूको UCR शुल्कहरू सेट गर्दछ Th० औं प्रतिशतक । यसको मतलब भनेको area०% प्रदान गरिएको क्षेत्रका मेडिकल प्रदायकहरूले बिमा कम्पनीको UCR दर भन्दा बराबर वा कम चार्ज गरे।
यहाँ कसरी गरिन्छ यसले कार्य गर्दछ जब तिनीहरू कभर आउँछन्। मानौं कि तपाईं दौडमा गर्दा तपाईंको मेनिस्कस फाड्नुहुन्छ र यसलाई मर्मत गर्न तपाईंसँग शल्यक्रिया छ। तपाइँ एक आउट-अफ-नेटवर्क सर्जन जसले प्रक्रियाको लागि $ ,000,००० बिल गर्दछ। तर तपाइँको बीमा कम्पनीको त्यो प्रक्रियाको लागि UCR शुल्क $ 5,000 हो। यदि तपाइँको बीमा कम्पनीले तपाइँको पूरा गर्नु अघि सामान्यतया तपाइँको मेडिकल खर्चको %०% भुक्तान गर्दछ भने घटाउन योग्य , ती bill 5,000 सम्ममा तपाईंको बिल को 80% कभर हुनेछ। उनीहरूले आफ्नो यूसीआर दरभन्दा माथि cover १,००० लाई कभर गर्दैन, जसको अर्थ तपाईंले $ 5,000 युसीआर दरको २०% सिक्काइन्स थप गर्नुपर्दा, तपाईंले $ १,००० युसीआर शुल्क तिर्नु पर्ने हुन सक्छ।
धेरै केसहरूमा, बीमा कम्पनीहरूले तपाईंको कटौतीयोग्यमा वा UCR दर माथि भुक्तान गरेको पैसा गणना गर्दैन अधिकतम बाहिरको जेब । यसको मतलव तपाईले नेटवर्क बाहिरका डाक्टरहरुलाई नियमित रुपमा प्रयोग गर्नु भयो भने तपाईले मेडिकल बिलहरुमा मोटा रकम तिर्न सक्नुहुन्छ।
शुभ समाचार यो छ कि प्राय जसो बीमा योजनाहरू, जस्तै HMOs वा PPOs, प्रदायकहरूको ठूलो नेटवर्कको साथ आउँदछ, डाक्टरहरू, अस्पतालहरू, प्रयोगशालाहरू, र चिकित्सकहरू सहित। यदि तपाईं त्यो नेटवर्कमा बस्नुहुन्छ भने, तपाईंले UCR शुल्क तिर्नुहुन्न।
मेडिकेयरसँग UCR दरहरूको आफ्नै संस्करण छ चिकित्सा अनुमति शुल्क । मेडिकेयरमा भाग लिन सहमत हुने कुनै पनि प्रदायक बीमाकर्ताको पूर्ण भुक्तानीको रूपमा मेडिकेयर स्वीकार्य शुल्क दर स्वीकार्न पनि सहमत गर्दछ। तर केहि डाक्टरहरू जो गैर-सहभागी प्रदायक छन् घुमाउन सक्छन् र भिन्नताको लागि तपाईंलाई बिल दिन सक्छन्। त्यसो हुनबाट रोक्न मद्दतको लागि, डाक्टरहरूलाई सोध्नुहोस् यदि उनीहरू मेडिकेयर असाइनमेन्ट स्वीकार्छन्, जसको मतलब उनीहरूले तपाईलाई बिलको शेष रकम तिर्न सोध्दैनन्। तपाईं, तथापि, अझै पनि तपाईंको कटौती योग्य तिर्न पर्ने छ र सिक्सीरेन्स ।
केही मेडिगाप, वा मेडिकेयर पूरक योजनाहरू, अतिरिक्त चिकित्सकहरूको शुल्कको लागि पनि सहयोग गर्न सक्दछ।
कहिले सम्म तपाइँ योजना बी को उपयोग गर्न को लागी छ?
UCR शुल्क के हो?
त्यहाँ धेरै धेरै नियमहरू छैनन् कि बीमा कम्पनीहरूले उनीहरूको सामान्य, परम्परागत, र उचित दरहरू कसरी निर्णय गर्छन् भनेर निर्धारण गर्दछ। धेरैले आफ्नो डेटा प्रयोग गर्छन् स्थानीय डाक्टरहरूले प्रक्रियाहरूका लागि के चार्ज गरिरहेका छन् भनेर निर्धारण गर्न। कानूनी रूपमा, यद्यपि, बीमा कम्पनीहरूले उनीहरूलाई बताउनुपर्दछ कि उनीहरूले कसरी दरको बारेमा आयो भने सोध्नुहोस्।
त्यहाँ केहि आधारभूत नियमहरू छन्, यद्यपि, बिमा कम्पनीहरूले निर्णय लिनको लागि अनुसरण गर्दछ यदि कुनै चार्ज सामान्य, प्रथागत र व्यावहारिक हो। चार्ज चिकित्सा प्रदायकले विगतमा (सामान्य) चार्ज गरेकोसँग अनुरूप छ, यो अन्य क्षेत्र चिकित्सकहरूले चार्ज गरेको (परम्परागत) दायरासँग मिल्दछ, र यसले कि सामान्य र परम्परागत मापदण्ड दुवै पूरा गर्दछ वा यो विशेष अवस्था (उचित) हो। । यदि बीमा कम्पनीले सोच्छ कि तपाईंको चिकित्सा प्रदायकको शुल्कले त्यो मापदण्ड पूरा गर्दैन, तिनीहरू केवल UCR दर तिर्न सहमत हुनेछन्, र तपाईले बाँकी तिर्नु पर्ने हुन्छ जुन UCR शुल्क हो।
के तपाई युसीआर शुल्क तिर्नबाट बच्न सक्नुहुन्छ?
UCR शुल्क तिर्नबाट बच्न उत्तम तरिका भनेको नेटवर्क प्रदायकहरू प्रयोग गर्नु हो। कहिलेकाँही, त्यो अपरिहार्य छ। यदि तपाईंलाई पहिले नै थाहा छ कि तपाईंले एउटा प्रयोग गरिरहनु भएको छ नेटवर्क प्रदायक , प्रक्रिया वा सेवाको लागि कति तिनिहरू डाक्टरलाई सोध्नुहोस्। त्यसो भए आफ्नो बीमा कम्पनीलाई सोध्नुहोस् कि उनीहरूको UCR चार्ज त्यो प्रक्रियाको लागि के हो। तपाईं आफ्नो डाक्टरलाई पूर्ण रूपमा भुक्तानीको रूपमा बीमाको यूसीआर शुल्क स्वीकार्न सहमत गर्न सक्षम हुन सक्नुहुन्छ।
तपाईको बीमा कम्पनीले युसीआर दर भन्दा बढी तिर्नको लागि पनि सक्षम हुन सक्दछ यदि डाक्टरले एक चिठी लेख्यो कि उनीहरूले किन कुनै निश्चित प्रक्रियाको लागि बढी शुल्क लिनु पर्छ। यो पनि सम्भव छ कि तपाईको बीमा कम्पनीले तपाईको बिल पोस्ट प्रक्रिया समायोजित गर्न सहमत गर्न सक्छ यदि तपाईले देखाउन सक्नु हुन्छ कि क्षेत्रका अन्य धेरै डाक्टरहरूले तपाईको डाक्टरले बिल गरेको रकम बराबर रकम लिन्छन्।
के UCR शुल्कहरू प्रिस्क्रिप्शन ड्रगमा लागू हुन्छ?
भाग्यवस, जब यो औषधि प्रिस्क्रिप्शनको कुरा आउँछ, यो यूसीआर फीसको बारेमा चिन्ता गर्न सामान्य छैन। यो किनभने प्रिस्क्रिप्शन ड्रगहरूको लागि UCR चार्ज भनेको बीमा बिना कसैले औषधिको लागि भुक्तान गर्ने रकम हो। यसलाई नगदी मूल्यको रूपमा पनि चिनिन्छ।
शुभ समाचार यो छ कि एकलकेयरले तपाईंलाई आफ्नो सल्लाहमा बचत गर्न मद्दत गर्दछ - तपाईंको बीमा स्थितिलाई फरक पर्दैन। हामी विश्वास गर्दछौं कि सबैले आफ्नो औषधि किन्न सक्षम हुनुपर्दछ। तपाइँको ड्रग्स को लागी खोज सुरू गर्नुहोस् singlecare.com । तपाईं 80०% सम्म बचत गर्न सक्नुहुनेछ।
म्याट ह्यूजेस कार दुर्घटना अपडेट: यूएफसी फाइटरको स्वास्थ्य अवस्था
Klonopin vs. Ativan: मतभेद, समानताहरू र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ
यो भियग्रा को लागी कसरी काम गर्न को लागी लिन्छ
तपाइँ आफ्नो रक्तचाप उच्च छ जब व्यायाम गर्नुपर्छ
तपाइँ कहिले फ्लू संग संक्रामक हुनुहुन्छ
Ooop स्वास्थ्य बीमा मा के को लागी खडा छ?
कति 200mg ibuprofen मैले लिनु पर्छ
xans लाई किक आउन कति समय लाग्छ?
के म claritin र benadryl सँगै लिन सक्छु?